Xutiyiinta oo lagu eedeyay weerar lagu qaaday xero milatari oo Yemen ku taal - BBC News Somali
Xutiyiinta oo lagu eedeyay weerar lagu qaaday xero milatari oo Yemen ku taal
Wararka ka imanaya dalka yemen ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay xero milateri oo ku taalla koonfurta dalka Yemen ee magaalada Al-Dhalea, shan qof ayaana ku dhimatay. Weerarkaasi ayaa lagu eedeeyey xuutiyiinta yemen ee ku xooggan waqooyiga Yemen.
Dad goob-joogeyaal ah ayaa BBC-da u sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli la soo xirayay xaflad loo sameeyay askar ka tirsan maleeshiyaadka xoogagga Belta oo ah koox awood badan oo taageero ka hesho dowladda Imaaraadka Carabta.
Waxaana kooxdani ay qeyb ka tahay isbahaysiga ka garab dagaallamaya dowladda Yaman ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka xuutiyiinta Yaman.
Telefishinka Al-Carabiya ee laga leeyahay dalka Sucuudiga ayaa sheegay in ugu yaraan sagaal qof ay weerarkaasi ku dhinteen halka siddeed kale ay ku dhaawacmeen.
Af-hayeen u hadlay ciidamada dowladda Yaman oo ku sugan deegaankaasi ayaa weerarkaasi ku eedeeyay maleeshiyaadka kooxda fallaagada ahi ee Xuutiyiinta.Haseeyeeshee, kooxdaasi kama aysan hadlin weerarkaasi.
Bishii Agusto ee sanadkan ayaa xuutiyiintu waxay weerar noocan oo kale ah ku qaadeen xaflad loo sameynayay ciidamo ka tirsan kooxdan haatan la weeraray ee Belta, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 30 qof.
Dalkaasi Yemen waxaa in muddo ah ka jirtay colaad galaafatay nolosha dad badan haseyeeshee waxay xaaladdu ka sii dartay bishii Maarso ee sanadkii 2015-kii, xilligaasi oo fallaagada xuutiyiintu ay la wareegeen inta badan galbeedka dalkaasi Yaman isla markaana uu madaxweynihii dalkaasi Cabdu-raabuu Mansuur Haadi uu u cararay dalka dibaddiisa.
Xutiyiinta: Saddex guuto oo ka tirsan ciidamada Sacuudiga ayaan nolosha ku qabanay
Imaaraadka oo waqti kama dambays ah u qabtay Xuutiyiinta ku sugan Xudeydah
Trump oo doonaya in uu kulan la yeesho Xassan Rouhani
Xaaladdaasi waxaa aad uga carooday dalka Sucuudiga iyo sidded waddan oo kale oo ah waddamada carabta, waxa ayna aad uga walwaleen Iraan oo ay sheegeen in ay taageero milatari siiso xuutiyiinta oo ah maleeshiyaad shiico ah. Waxaana waddamadaasi carbeed ay billaabeen duqeymo dhanka cirka ah oo ay ku taageerayaan dowladda madaxweyne Cabdu-rabuu Mansuur Haadi isla markaana ay ku beegsanayaan xuutiyiinta.
Xoogaggaasi isbahaysiga ee uu sucuudiga hormuudka u ahaa ayaa waxa ay sidoo kale taakulo hub iyo sirdoon ah ka helayeen waddamada Faransiiska, Britain iyo Mareykanka.
Dadka ku dhintay colaadda dalkaasi ayaa lagu qiyaasaa 10 kun ilaa 70 kun, saddex meelood meel dadkaasi waxaa ay ku dhinteen duqeymaha Sucuudiga iyo xulufadiisa, waxaana intooda badan la sheegayaa in ay yihiin dad rayid ah. Sidoo kale colaadda dalkaasi waxaa ku barakacay malaayiin qof oo rayid ah.